Ekhaya | Hovesin(DG) Industrial Co.,Ltd.
Inkonzo yeOem / odm
I-S60 uyilo olutsha lwesitshixo emnyango, kusetyenziswa ulwakhiwo lwamva nje, olulungele zonke iingcango zealuminiyam ezingama-30mm-80mm, iingcango zomthi kunye neengcango zokhuseleko. Ngeli xesha iyahambelana neendidi ezahlukeneyo zokubhubha. Iindlela ezi-6 zokuvula, ezinokudityaniswa kwifowuni ephathwayo ngeWIFI okanye ngeBluetooth, kwaye iyakwazi ukulawula ukutshixa ucango nangaliphi na ixesha naphi na. Isetyenziswa ngokubanzi kwihlabathi liphela.
I-H50 Smart yokutshixa
I-H50 sisixhobo esipheleleyo esizenzekelayo sokutshixa umnyango esenziwe nge-alloy zinc kunye netekhnoloji entsha ezenzekelayo yokuvula kunye nokutshixa iingcango ngaphandle kokusebenzisa izandla zakho. 6 iindlela zokuvula, ezinokudityaniswa kwifowuni ephathwayo ngeWIFI okanye ngeBluetooth, kwaye iyakwazi ukulawula ukutshixa ucango nangaliphi na ixesha naphi na. Iya kukuzisela amava obomi obumangalisayo.
H10 Isitshixo esilungileyo
Uyilo olulula nolunokuhonjiswa, Ngeli xesha luyahambelana nezixhobo ezahlukeneyo zokubulawa kwabantu. Iindlela ezi-6 zokuvula, ezinokudityaniswa kwifowuni ephathwayo ngeWIFI okanye ngeBluetooth, kwaye iyakwazi ukulawula ukutshixa ucango nangaliphi na ixesha naphi na